China White Steel Pipe Cap နှင့် စက်ရုံ |CZ IT
ပစ္စည်း- သံမဏိ၊ Duplex သံမဏိ၊ နီကယ်သတ္တုစပ်
နံရံအထူ-SCH5S၊ SCH10၊ SCH10S ၊STD၊ XS၊ SCH40S၊ SCH80S၊ SCH20၊SCH30၊SCH40၊ SCH60၊ SCH80၊ SCH160၊ XXS၊ စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားပြီး စသည်တို့ဖြစ်သည်။
အရွယ်အစား 1/2"-60" ချောမွေ့စွာ၊ 60"-110" ဂဟေဆက်သည်။
စံ ANSI B16.9၊ EN10253-4၊ DIN2617၊ GOST17379၊ JIS B2313၊ MSS SP 75 စသဖြင့်
နံရံအထူ SCH5S၊ SCH10၊ SCH10S ၊STD၊ XS၊ SCH40S၊ SCH80S၊ SCH20၊SCH30၊SCH40၊ SCH60၊ SCH80၊ SCH160၊ XXS ၊စိတ်ကြိုက် နှင့် စသည်တို့
Steel Pipe Cap ကိုလည်း Steel Plug ဟုခေါ်သည်၊ ၎င်းကို ပိုက်အစွန်းတွင် ဂဟေဆော်ခြင်း သို့မဟုတ် ပိုက်အတားများကို ဖုံးအုပ်ရန် ပိုက်အဆုံး၏ ပြင်ပချည်ပေါ်တွင် တပ်ဆင်ထားသည်။ပိုက်လိုင်းကိုပိတ်ရန် လုပ်ဆောင်ချက်သည် ပိုက်ပလပ်နှင့် အတူတူဖြစ်သည်။
ချိတ်ဆက်မှုအမျိုးအစားများမှ အပိုင်းအခြား၊ 1.Butt weld cap 2.Socket weld cap များ ရှိပါသည်။
BW steel pipe cap သည် butt weld အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ချိတ်ဆက်သည့်နည်းလမ်းမှာ butt welding ကိုအသုံးပြုသည်။ထို့ကြောင့် BW ဦးထုပ်သည် beveled သို့မဟုတ် plain ဖြင့်အဆုံးသတ်သည်။
ပုံမှန်ပိုက်အရွယ်အစား အပြင်ဘက် အချင်း Bevel(mm) အရှည်E(mm) အလျားအတွက် နံရံအထူကို ကန့်သတ်ခြင်း၊ E အရှည်E1(mm) အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်)
၁/၂ ၂၁.၃ 25 ၄.၅၇ 25 ၀.၀၄ ၀.၀၃ ၀.၀၃ ၀.၀၅ ၀.၀၅
၃/၄ ၂၆.၇ 25 ၃.၈၁ 25 ၀.၀၆ ၀.၀၆ ၀.၀၆ ၀.၁၀ ၀.၁၀
1 ၃၃.၄ 38 ၄.၅၇ 38 ၀.၀၉ ၀.၁၀ ၀.၁၀ ၀.၀၁၃ ၀.၁၃
၁ ၁/၄ ၄၂.၂ 38 ၄.၈၃ 38 ၀.၁၃ ၀.၁၄ ၀.၁၄ ၀.၂၀ ၀.၂၀
၁ ၁/၂ ၄၈.၃ 38 ၅.၀၈ 38 ၀.၁၄ ၀.၂၀ ၀.၂၀ ၀.၂၃ ၀.၂၃
2 ၆၀.၃ 38 ၅.၅၉ 44 ၀.၂၀ ၀.၃၀ ၀.၃၀ ၀.၃၀ ၀.၃၀
၂ ၁/၂ 73 38 ၇.၁၁ 51 ၀.၃၀ ၀.၂၀ ၀.၅၀ ၀.၅၀ ၀.၅၀
3 ၈၈.၉ 51 ၇.၆၂ 64 ၀.၄၅ ၀.၇၀ ၀.၇၀ ၀.၉၀ ၀.၉၀
၃ ၁/၂ ၁၀၁.၆ 64 ၈.၁၃ 76 ၀.၆၀ ၁.၄၀ ၁.၄၀ ၁.၇၀ ၁.၇၀
4 ၁၁၄.၃ 64 ၈.၆၄ 76 ၀.၆၅ ၁.၆ ၁.၆ 2.0 2.0
5 ၁၄၁.၃ 76 ၉.၆၅ 89 ၁.၀၅ ၂.၃ ၂.၃ ၃.၀ ၃.၀
6 ၁၆၈.၃ 89 ၁၀.၉၂ ၁၀၂ ၁.၄ ၃.၆ ၃.၆ 4.0 4.0
8 ၂၁၉.၁ ၁၀၂ ၁၂း၇၀ ၁၂၇ 2.50 4.50 ၅.၅၀ ၅.၅၀ ၈.၄၀ ၈.၄၀
10 ၂၇၃ ၁၂၇ ၁၂း၇၀ ၁၅၂ 4.90710 10 ၁၃း၆၀ ၁၆း၂၀
12 ၃၂၃.၈ ၁၅၂ ၁၂း၇၀ ၁၇၈79 15 19 22 ၂၆.၉၀
14 355.6 ၁၆၅ ၁၂း၇၀ ၁၉၁ ၈.၅၀ ၁၅.၅၀ 17 23 27 ၃၄.၇၀
16 ၄၀၆.၄ ၁၇၈ ၁၂း၇၀ ၂၀၃ ၁၄.၅၀ 20 23 30 30 ၄၃.၅၀
18 ၄၅၇ ၂၀၃ ၁၂း၇၀ ၂၂၉ 18 25 29 39 32 ၇၂.၅၀
20 ၅၀၈ ၂၂၉ ၁၂း၇၀ ၂၅၄ ၂၇.၅၀ 36 36 67 49 ၉၈.၅၀
22 ၅၅၉ ၂၅၄ ၁၂း၇၀ ၂၅၄ 42 42 51 ၁၂၀
24 ၆၁၀ ၂၆၇ ၁၂း၇၀ ၃၀၅ 35 52 52 93 60 ၁၅၀
6. ထောက်ပံ့ရေး MTC၊ EN10204 3.1/3.2 လက်မှတ်၊ NACE
1. အထပ်သားအိတ် သို့မဟုတ် အထပ်သားပြားဖြင့်ထုပ်ပိုးပါ။
4. သစ်သားအထုပ်အပိုးပစ္စည်းများအားလုံးကို မီးခိုးငွေ့ကင်းစင်ပါသည်။
ယခင်- Black Steel Pipe Tee
နောက်တစ်ခု: Stainless Steel 45/60/90/180 Degree Elbow
socket weld cap သည် socket weld cap ၏ access shoulder ဧရိယာထဲသို့ ပိုက်ကို ပိုက်ထည့်ခြင်းဖြင့် ပိုက်များနှင့် caps များကို ချိတ်ဆက်ရန်အတွက် ဖြစ်သည်။
SW ဦးထုပ်အရွယ်အစားနှင့် အလေးချိန်-
ဖိအားရေယာဉ်အတွက် Asme Clad ပန်းကန်
ဦးထုပ် Ellipsoidal ဦးခေါင်း
Tank အတွက် Hemispherical Dish End Head
ပိုက် Fitting Cap
Pressure Vessel Dished Head၊
Semi Hemispherical ဦးခေါင်း